DataBase | our notes for our youngers
Filed under: ASP.NET, DataBase, developing website — Tags: .NET, ASP.NET, building website, C#, programming — sevenlamp @ 4:47 PM သူငယ်ချင်းတို့ရေ… မတွေ့တာလဲကြာပြီ မင်္ဂလာရှိသော… သာယာအေးချမ်းသော… ပျော်ရွှင်စရာ Christmas ချိန်ခါလေး ဖြစ်ကြပါစေနော်။
ဒီ တစ်လော ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ပိနေတာနဲ့ ဘလော့လေးကို ပစ်ထားသလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပိုဒ့်တွေ ပြန်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ရန်ကုန်မှာက သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီ အချိန်ရောက်ရင် မီးက ဖောက်လာပြီလေ။ အဲဒီတော့ အိမ်မှာလည်း မီးလာတဲ့ အချိန်လေးမှာပဲ computer သုံးဖြစ်တာဆိုတော့၊ နည်းနည်းတော့ သည်းခံပြီး စောင့်ပေးကြပါလို့ အရင်ဆုံး တောင်းဆိုပါရစေ။
အခုကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ လုပ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတာ တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ အဲ့ဒါ ဘာလဲဆိုတော့ ASP.NET နဲ့ CMS လေးတစ်ခုလောက် ဆောက်ချင်တာပါ။ CMS ဆိုရင် အရမ်းကျယ်နေမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူးဗျ။ ဒါကြောင့် အခု စလုပ်မလားလို့။ နည်းနည်းချင်းစီပေါ့ဗျာ။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေး တစ်ခုစပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ ဘယ်တော့ ပြီးမလဲတော့ မသိဘူးပေါ့။ ညီတို့လည်း ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူ လိုက်ပြီး လုပ်ကြည့်စေချင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရမှာပါ။
ဒီ project လေး လုပ်ဖို့ ဘာတွေ လုပ်မလဲပေါ့။ အရင်ဆုံး လိုတာက စလုပ်ဖို့လိုတာပါ။ ကဲ.. အခု အရင်ဆုံး ကျွန်တော်က ဘလော့လေးရဲ့ design အတွက် google ကနေ free template တွေ လိုက်ရှာလိုက်တယ်ဗျာ။ အခုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ template လေးက ဒီမှာပါ။
ညီတို့ စိတ်ကြိုက် template လေးတွေ ရှာလိုက်ပါ။ http://www.freewebsitetemplates.com/
မှာလည်း template လန်းလန်းလေးတွေ ရှိတယ်။ template တစ်ခု download လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် သူ့မှာ များသောအားဖြင့် html file တစ်ဖိုင်ရယ်၊ CSS file တစ်ဖိုင်ရယ်၊ Image folder တစ်ခုရယ် ပါလာလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ design လေး ရလာအောင် ပြုပြင်ရမှာပါ။ အခုစပြီးပြင်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော် VS2008 မှာ new website တစ်ခု ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ Template မှာ ပါလာတဲ့ Image folder နဲ့ Css folder ကို project ထဲ copy – paste လုပ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် index.htm file လေးကိုပါ project ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ html code တွေကို ကြည့်ပြီး အရင်ဆုံး Home page ကို စပြီး design ဆွဲပါတယ်။ အခုထိ ကျွန်တော် လုပ်ပြီးသမျှကို http://www.sevenlamp.co.cc/home.aspx
မှာ ၀င်ရောက်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး ပြီးသွားရင်တော့ ဒီ wordpress.com ကနေ အိမ်ပြောင်းတော့မယ်။ ( မျှော်မှန်းထားတာပါပဲ )
ကျွန်တော်လည်း ဆက်ပြီး design ပြင်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ နောက်မှဆက်ကြတာပေါ့။
Comments (9)	September 24, 2009
basic of SQL Statement (part 8)
Filed under: SQL Commands — Tags: alter function, create function, DataBase, drop function, function — sevenlamp @ 9:32 AM ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ SQL Server 2005 မှာ function တွေကိုယ်တိုင် ဆောက်ပြီး သုံးတဲ့ ပုံစံလေး လေ့လာလိုက်ရအောင်ဗျာ။ function ၂ မျိုးဆောက်လို့ရတယ်ဗျ။ Table-valued function နဲ့ Scalar-valued function တိုဖြစ်ပါတယ်။ Table-valued function ရဲ့ return type က table တစ်ခုလိုမျိုး column တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ data တွေကို return ပြန်ပါတယ်။ Scalar-valued function ကတော့ return value အနေနဲ့ column တစ်ခုပဲ return ပြန်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး scalar-valued function လေး တစ်ခုလောက် ရေးကြည့်ရအောင်။ မနေ့တုန်းက ရေးခဲ့တဲ့ category တွေနဲ့ total balance ထုတ်တဲ့ query လေးကို ပြန်ရေးပါ့မယ်။
where item.categoryid = category.categoryid
) as totalbalance
အိုကေ ဒီquery ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ subquery လေးကို ကျွန်တော်က function လေးခွဲပြီး ရေးချင်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် query ရေးတဲ့ နေရာမှာ ပိုပြီးရှင်းသွားမယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်လိုချင်တာက totalbalance တစ်ခုထဲဖြစ်တဲ့ အတွက် scalar-valued function ဆောက်ပါမယ်။ ဒီလိုပါ…
CREATE FUNCTION GetTotalBalance (@CategoryID int)
DECLARE @TotalBalance int
SELECT @TotalBalance = SUM(balance)
Function ဆောက်ဖို့ CREATE FUNCTION keyword ကိုသုံးပါတယ်။ ပြန်ပြင်ဖို့အတွက်တော့ ALTER FUNCTION နဲ့
ALTER FUNCTION GetTotalBalance (@CategoryID int)
ဖျက်ဖို့အတွက်တော့ DROP FUNCTION keyword တို့ကို သုံးပါတယ်။
DROP FUNCTION GetTotalBalance
ဒီ function မှာ CategoryID ကို parameter လက်ခံပြီး item table ထဲမှာ အဲ့ဒီ categoryID ရဲ့ totalbalance ကို return ပြန်ပါတယ်။ အိုကေ အခုကျွန်တော်တို့ ဒီ function ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ query တွေမှာ ပြန်ခေါ်သုံးလို့ ရပါပြီ။
select category.*, dbo.GetTotalBalance(categoryID)
ကဲ နောက်ထပ် FUNCTION တစ်မျိုးက Table-valued function. အခုကျွန်တော် categoryname, totalbalance နဲ့ totalamount တို့ကို ထုတ်ပြချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက် Table-value function လေး ဆောက်ရအောင်။ သူလည်းပဲ Create function keyword ကိုပဲ သုံးပါတယ်။
CREATE FUNCTION GetItemByCategory()
sum(balance) as totalBalance,
sum(price * balance) as totalamount
ပြီးရင် အဲ့ဒီ function လေးကို ဒီလို ခေါ်ပါမယ်
select * from GetItemByCategory()
LeaveaComment	September 19, 2009
basic of SQL Statement (part 7)
Filed under: SQL Commands — Tags: ADO.NET, DataBase, subquery — sevenlamp @ 2:10 PM ဒီနေ့လည်း ကျွန်တော်တို့ SQL statement တွေအကြောင်းပဲ ဆက်ပြောရအောင်ဗျာ။ subquery အကြောင်းပြောချင်လို့ဗျ။ ကျွန်တော်က category table ထဲက categoryID 1, 3,5နဲ့ တူတာတွေ ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်… OR ကိုသုံးရင် ဒီလိုရေးရမယ်…
where categoryid = 1 or categoryid =3or categoryid = 5
categoryID အများကြီး ကိုခုလိုမျိုး စစ်မယ်ဆိုရင် OR ကိုသုံးရတာ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဒီအခါမှာ In keyword ကိုသုံးပြီး ခုလိုရေးလို့ရပါတယ်…
where categoryid in ( 1, 2,3)
အခုကျွန်တော်က စုစုပေါင်း ကုန်လက်ကျန် ၅ခု ထက်များတဲ့ category တွေကို ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်…
select categoryid from item
အပေါ်က ရေးထားတဲ့ query ကို တစ်ပိုင်းချင်း အရင် run ကြည့်လိုက်
ကို run ရင် အဖြေက 1,2 ဆိုပြီးထွက်လာမယ်၊ အဲ့ဒီ result ကိုမှ ပေါ်က query က in နဲ့ ပြန်စစ်ယူသွားတာ။ ဒီလို query တစ်ခုထဲမှာပါတဲ့ နောက်ထပ် query ကို subquery ဒါမှမဟုတ် inner query လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခု where နောက်မှာ ရေးတဲ့ subquery မှာ column အများကြီးထုတ်လို့မရဘူး။ where နောက်က condition စစ်ထားတဲ့ column တစ်ခုကိုပဲထုတ်ပေးရတယ်။ select နောက်မှာ column တစ်ခုအနေနဲ့လည်း subquery ကိုသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ ဥပမာဗျာ.. ကျွန်တော်က category အားလုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုန်လက်ကျန်စုစုပေါင်းကိုပါ ပြချင်တယ်ဆိုရင်….။
where category.categoryid = item.categoryid
group by item.categoryid
ဒီ query လေးမှာ အဓိက ထုတ်တာကတော့ category table ပဲ၊ totalbalance column အတွက်မှ နောက်ထပ် query ကိုထပ်ခေါ်သွားတာ။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက subquery ထဲကနေ ထွက်လာမယ့် value က only one row ပဲဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် where category.categoryid = item.categoryid ဒီအပိုင်းလေး ထည့်ရေးပေးရတယ်။ ဟုတ်ပြီ… ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ subquery ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာ နည်းနည်း သိလောက်ပါပြီ။ အခု အပေါ်က query ကိုပဲ ကြည့်ပါ select ထဲမှာ နောက်ထပ် select တွေ ထပ်ရေးတော့ query ကိုကြည့်လိုက်ရင် ရှုပ်နေသလို ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမျိုးမှာ ပိုပြီး ရှင်းသွားဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပိုင် function တွေဆောက်ပြီး ရေးလို့ရပါတယ်။ အိုကေ.. function တွေအကြောင်းကို နောက်မှ ဆက်ပြောရအောင်။
LeaveaComment	September 18, 2009
Filed under: SQL Commands — Tags: cross join, DataBase, inner join, left join, outer join, right join, select — sevenlamp @ 10:00 AM Sql statement တွေဘက်ကိုတော့ မလှည့်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ရေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီး အချိန်ကမရှိဘူးဖြစ်နေတာနဲ့ ရှေ့မဆက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရတဲ့အချိန်လေးလုပြီး ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ထပ်ရေးနေဦးမှာမို့ အားပေးကြပါဦးဗျာ။ ကဲ… ကျွန်တော်တို့ select statement ကို ပြောလက်စ ဆက်ပါဦးမယ်။ table တစ်ခုထဲက data ကို ထုတ်ကြည့်တာကိုတော့ နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ table တွေထဲက data တွေကို ထုတ်ကြည့်ရအောင်။ ဥပမာဗျာ… item table ထဲက record အားလုံးပြမယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် categoryid အစား categoryname ကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်၊ item table နဲ့ category table ၂ ခုကို ချိတ်ရတော့မှာပါ။ ဟုတ်ပြီ… ဒါဆိုရင် table တွေ ချိတ်ဖို့အတွက် ဘာတွေလိုလဲ… ?
ViewSonic 17” Flat CRT
First Eleven Book
Moon 16” Stand Fan
Comments (2)	August 3, 2009
basic of SQL Statement (part 5)
Filed under: SQL Commands — Tags: aggregate function, having, select — sevenlamp @ 2:15 PM အခု ကျွန်တော်တို့ Select quary တွေမှာ count တို့ sum တို့ စသည့်ဖြင့် function တွေထည့်သုံးကြည်ရအောင်။ အဲ့ဒီ function တွေကို aggregate function တွေလို့ ခေါ်တယ်။ ဒီလို aggregate function တွေပါတဲ့ query တွေကိုလည်း aggregate query လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီ function တွေကို ကျွန်တော်တို့ Select ရဲ့ နောက်မှာ ဖြစ်စေ၊ Having ရဲ့နောက်မှာ ဖြစ်စေ၊ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အခုကျွန်တော်က ItemTable ထဲမှာ ရှိတဲ့ record အရေအတွက်ကို သိချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် Count ဆိုတဲ့ aggregate function ကိုသုံးပြီး ခုလိုရေးရမှာပါ။
SELECT count(*) AS ItemCount FROM item
Count ဆိုတဲ့ function က ကျွန်တော်တို့ Table ထဲမှာ ရှိတဲ့ record အရေအတွက်ကိုစစ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ function ထဲမှာ * ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်ရာ column name ထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒီ function တွေကိုသုံးရင် ထွက်လာတဲ့ result မှာ column name မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က column name ထည့်ပေးဖို့အတွက် AS keyword ကိုသုံးပါတယ်၊ AS နောက်မှာ ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ ItemCount ဆိုတဲ့ နံမည်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တခြား Function တွေကိုလည်း စမ်းကြည့်ရအောင်။ ကျွန်တော်အခု စုစုပေါင်းကုန်လက်ကျန်ကို သိချင်တယ်ဆိုရင်။
SELECT sum(balance) AS TotalBalance FROM item
အခုကျွန်တော်တို့ aggregate function တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ table ထဲက record အားလုံးအတွက် result တစ်ခုထဲထွက်တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် အခုကျွန်တော်က Category တစ်ခုစီအတွက် ကုန်လက်ကျန်ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ရော။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Group By keyword နဲ့ တွဲသုံးပေးဖို့လိုလာပါပြီ။
SELECT categoryid,sum(balance) AS TotalBalance
*** မှတ်ထားစရာ အချက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျ။ select ထဲမှာ aggregate function တွေ ပါပြီဆိုရင်၊ Group By လုပ်ထားတဲ့ column တွေကလွဲပြီး တခြား column တွေကို ထည့်ရေးခွင့် မရှိပါဘူး***
အခု Having keyword အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ query မှာ condition စစ်စရာတွေ ရှိရင် where ကိုသုံးရတယ်ဆိုတာ သိပြီးကြပြီနော်။ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီ where keyword က database ထဲမှာ ရှိတဲ့ column name တွေကိုပဲ စစ်လို့ရပါတယ်။ တခါတလေကျွန်တော်တို့က aggregate function ကထွက်လာတဲ့ result တွေကို စစ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင်တော့ Having ကိုသုံးရတော့မှာပါပဲ။ ဥပမာ ကုန်လက်ကျန် စုစုပေါင်း ၁၀ ခုထက်နည်းနဲ့ category ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်။
HAVING sum(balance) < 10
Having ကို where လိုမျိုးလဲ column တွေစစ်ဖို့အတွက် သုံးလို့လည်း ရပါတယ်။ category id 1 ရဲ့ totalbalance ကိုပြဖို့အတွက်
HAVING categoryid = 1
LeaveaComment	July 31, 2009
basic of SQL Statement (part 4)
Filed under: SQL Commands — Tags: DataBase, order by, select, where — sevenlamp @ 2:21 PM ဒီနေ့ Select Statement အကြောင်းပဲ ဆက်ရအောင်ဗျာ။ WHERE အကြောင်းပဲ ဆက်ပြောပါ့မယ်။ အခုကျွန်တော်က ကုန်လက်ကျန် ၁၀ ခုထက်နည်းပြီး ဈေးနှုန်းကလည်း ၁၀၀၀၀ အထက်ရှိတဲ့ item တွေရဲ့ list ကိုကြည့်ချင်တယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုရေးရမှာပေါ့…
WHERE balance < 10 AND price > 10000
ဒီ query လေးမှာ ကျွန်တော်စစ်ချင်တဲ့ condition က ၂ ခုရှိနေတယ်။ balance ၁၀ ခုထက်နည်းရမှာရယ်၊ price ၁၀၀၀၀ ထက်များရမှာရယ်။ အဲ့ဒီ condition ၂ ခုလုံးမှန်တာကိုပဲ လိုချင်တာ ဖြစ်တော့ Where နောက်မှာ condition ၂ ခုကို AND နဲ့ဆက်ပြီးရေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စစ်ချင်တဲ့ condition တွေ ၁ခုထက်ပိုများလာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ condition တွေကြားမှာ AND ဒါမှမဟုတ် OR ဆိုတဲ့ keyword လေးတွေထည့်ရေးပေးရမယ်။ အပေါ်က query လိုမျိုး condition ၂ ခုလုံးမှန်မှ result ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် AND ကိုသုံးရပြီး။ condition တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုမှန်ရုံနဲ့ result ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ OR ကိုသုံးရမှာပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်တော်က electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ computer ပစ္စည်းတွေကိုပဲ ကြည့်ချင်တယ် ဆိုပါစို။ ဒါဆို ဒီလိုရေးရမှာပါ…
WHERE CategoryID = 1 OR CategoryID = 3
တခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တဲ့ condition က value ၂ ခုကြားဖြစ်ခဲ့ရင် BETWEEN ကိုလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ balance ၂ ခုကနေ ၁၀ ခု ကြားထဲက record တွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင်…
WHERE balance BETWEEN2AND 10
ထွက်လာတဲ့ result ရဲ့ ဆန်ကျင်ဘက် ပြောင်းပြန်ကို လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ NOT ကို တွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။
WHERE balance NOT BETWEEN2AND 10
တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ record တွေက အစီအစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ condition စစ်တဲ့အခါ OR တွေအများကြီးသုံးရမယ့် အနေအထားတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်က ItemID 1,3,5 ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် OR သုံးပြီးစစ်ရင် ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်။
WHERE ItemID = 1 OR ItemID =3OR ItemID = 5
ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ IN ကိုသုံးပြီးရေးရင် ပိုလွယ်မှာပါ။
WHERE ItemID IN ( 1,3,5 )
ItemID 1,3,5 ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေ ပြမယ်ဆိုရင်တော့
WHERE ItemID NOT IN ( 1,3,5 )
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ WHERE Condition တော်တော်လေးစစ်တက်ပြီလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ အခုနောက်ထပ် ORDER BY အကြောင်း ဆက်ပြောပါ့မယ်။ Select Query ကနေထွက်လာတဲ့ result record တွေကို sorting လုပ်ချင်ရင် Order By keyword ကိုသုံးရမှာပါ။ အိုကေ အခုကျွန်တော် Item table ထဲက record တွေအားလုံးကြည့်ချင်တယ်။ ကုန်လက်ကျန်အနည်းဆုံးက အပေါ်ဆုံးမှာပြချင်တယ်ဆိုရင်….
ORDER BY balance
Order by keyword က default အားဖြင့် ငယ်စဉ်ကြီးလိုက်(Ascending) စီပေးပါတယ်။ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်(Descending) စီချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စီချင်တဲ့ column name နောက်မှာ DESC ဆိုပြီးထည့်ပေးရပါမယ်။ ဥပမာ ကုန်လက်ကျန်အများဆုံးကို အပေါ်ဆုံးကနေ ပြချင်ရင်…
အခုလို sorting စီတဲ့နေရာမှာ Column တစ်ခုထက်ပိုပြီး စီချင်ရင် comer(,) လေးတွေ ခြားသွားရုံပါပဲ။ ကုန်လက်ကျန် အနည်းဆုံးကို အရင်စီမယ်၊ ကုန်လက်ကျန် အရေအတွက်ချင်း တူရင် ဈေးနှုန်းအများဆုံးကို အပေါ်ကထားချင်တယ်ဆိုရင်….
ORDER BY Balance ASC, Price DESC
(*** ASC ကို ထည့်ရေးရေး၊ မရေးရေး ရပါ၏ ***)
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Simple Select Query တွေ ရေးတက်ပါပြီ။
LeaveaComment	July 30, 2009
basic of SQL Statement (part 3)
Filed under: SQL Commands — Tags: DataBase, select — sevenlamp @ 6:16 PM Select Statement
SQL Statement ၄ မျိုးမှာဖြင့် ဒီ select က အရှုပ်ဆုံးပါပဲဗျာ။ user ကြည့်ချင်တဲ့ result ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ select command ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ သုံးရမှာပါ။ အရှုပ်ဆုံးဆိုလို့လည်း လန့်မသွားနဲ့ဦးနော်၊ ဘယ်အရာမဆို မသိရင်ခက်ပြီး သိသွားရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ ကဲ.. အလွယ်ဆုံးကနေ စလိုက်ရအောင်။ ပထမဆုံး ကျွန်တော်က Category Table ထဲက record တွေအားလုံးကို user ကို ထုတ်ပြချင်တယ် ဆိုပါတော့။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုရေးရမှာပါ။
Select command ရဲ့ နောက်မှာ ကိုယ်ထည့်ကြည့်ချင်တဲ့ column name တွေပေးရမှာပါ။ ရှိသမျှ ကော်လံအားလုံးကို ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အခုရေးလိုက်သလို (*) ကို သုံးလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါဆို အခုကျွန်တော်က CategoryID နဲ့ CategoryName ၂ ခုပဲ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။
SELECT CategoryID,CategoryName FROM Category
ဘယ်လိုလဲ လွယ်ပါတယ်နော်။ လွယ်မှာပေါ့ ဒါက အရိုးရှင်းဆုံး select ပုံစံကို။ ကဲ အခုကျွန်တော်က category table ထဲက record အားလုံးမကြည့်ချင်ဘူး Status က Active ဖြစ်တဲ့ Category တွေပဲ ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် Condition ပြန်စစ်ဖို့လိုလာပါပြီ။ select command မှာ condition စစ်ဖို့အတွက် where ရယ်၊ having ရယ် ၂ ခု ကြိုက်တာသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီ ၂ ခုဘာကွာလဲဆိုတာ နောက်မှပြောပြပါမယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က where ကိုပဲ သုံးပြီး စစ်လိုက်ပါမယ်။
SELECT * FROM Category WHERE Status = ‘Active’
ဒါဆိုရင်တော့ record ၃ ကြောင်းပဲ ပြပါတော့မယ်။
နက်ဖန်မှဆက်ရေးတော့မယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ ပြန်ရတော့မှာမို့လို့။
basic of SQL Statement (part 2)
Filed under: SQL Commands — Tags: DataBase, delete, update — sevenlamp @ 5:14 PM Update Statement
set columnname = newvalue [,columnxname = newvaluex...]
where columnname OPERATOR value [and|or columnnamex OPERATOR valuex];
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ table ထဲက data တွေကို ပြန်ပြီး ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ SQL Update Command ကိုသုံးပါတယ်။ Update Command ကို Set keyword နဲ့ တွဲပြီး သုံးပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ခုနတုန်းက insert quary2မှာ ကျွန်တော်က categoryid နဲ့ categoryname ၂ ခုပဲထည့်လိုက်တယ်၊ status ကိုမထည့်ပေးလိုက်ဘူး။ ဒါဆိုရင် status က NULL value အနေနဲ့ ရှိနေမှာပါ။ ဒါကို အခု ကျွန်တော်က Active လို့ထည့်ပေးချင်တယ်ဆိုပါတော့… ဒါဆိုရင် ဒီလိုရေးရပါမယ်။
SET Status = ‘Active’
ဒီ update quary လေးမှာ ရေးလိုက်တာတွေကတော့ UPDATE command ရဲ့ အနောက်မှာ ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ tablename ထည့်ပေးရမယ်။ ပြီးရင် SET keyword ရဲ့ နောက်မှာ ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ column name = value ကို comer(,) လေးခံပြီး ကြိုက်သလောက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ အခု example မှာတော့ ကျွန်တော်က Status column တစ်ခုထဲပြင်ချင်တာမို့တခုထဲပေးတာပါ။ ပြီးနောက်မှာမှ WHERE keyword ကိုသုံးပြီး ကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့ report ကိုရွေးထုတ်ပါတယ်။ CategoryID2နဲ့ ညီတဲ့ record ကိုပဲပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ WHERE မပါပဲလည်း ရေးလို့ရပါတယ်။ အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Category table ထဲက record တွေအားလုံးကို ပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် update statement ရေးရင် WHERE ထည့်ရေးဖို့ လိုလေ့ရှိပါတယ်။
where columnname OPERATOR value [and|or
columnnamex OPERATOR valuex];
Delete statement ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ table ထဲက record တွေကိုပြန်ဖျက်ချင်ရင် သုံးရမှာပါ။ တခုသိထားဖို့လိုတာက delete command ကိုသုံးရင် record (row) တခုလုံးဖျက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ column value တစ်ခုထဲကို ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ delete command မသုံးရပါဘူး။ update command ကိုပဲသုံးရပါမယ်။ ကဲ ကျွန်တော်က category table ထဲက record တွေအားလုံးကို မသုံးချင်တော့ဘူး ဆိုပါတော့…
Delete command ကို From နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်၊ နောက်မှာတော့ ဖျက်မယ့် table name ထည့်ပေးရမှာပါ။ record အားလုံးဖျက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ update command တုန်းကလိုမျိုး Where statement ကိုသုံးပြီး ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ record ရအောင်ပြန်စစ်ထုတ်ရပါမယ်။
Insert, Update နဲ့ Delete Statement တွေဟာ ရေးရတာရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်။ တကယ်ရှုပ်တာကတော့ Select Statement ပါ။ အခုကျွန်တော်တို့ select statement ကိုမသွားခင် ကျွန်တော်တို့ဆောက်ထားတဲ့ category နဲ့ item table တွေထဲကို data လေးတွေထည့်ပေးပါဦး။ ဒါမှ select ပြန်လုပ်လို့ရမှာပါ။ insert command ကိုသုံးနော်။